ဆီမီးခွက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်အလင်းပေးသွင်းသူ -Giga Lighting
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလင်းရောင်ဒီဇိုင်းနှင့် 1995 ခုနှစ်မှစ. ထုတ်လုပ်သူ။
LAMP ထုတ်လုပ်သူများသည်မီးအိမ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမီးအိမ်များထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အထူးပြုသည်။ LED illumination ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြေရှင်းချက်ကိုအာရုံစိုက်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ SOLORative မီးခွက်များနှင့်စီးပွားဖြစ်အလင်းများကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။
LED မျက်နှာကျက်& LED သည် 0465 စီးရီးပုံစံ - ခေတ်မီမီးအိမ်, ခေတ်ပြိုင်မီးခွက်, အိမ်အလှဆင်မီးအိမ်ပစ္စည်း: Iron + acrylicအရွယ်အစား: DIA ။ 400mm / 600mm / 800mmLumen: 80-85lm / W, dimmableအရောင် - စန္ဒီအဖြူရောင် / စန္ဒီအနက်ရောင် / ရွှေရောင်ဆေးကြော / သစ်သားပန်းချီကားများအလင်းရင်းမြစ် - 2835 ဦး ဆောင်ခဲ့သည်Certificate: CACE CB / CB / VDE / TUV / UL / ETL / SAA
ပြားစီးရီးနံပါတ်။ : 0512စတိုင်: postmodernism lampပစ္စည်း: သံမဏိသံမဏိ& acrylicအရွယ်အစား: DIA ။ 550mm / 800mmfinish: ပန်းချီအလင်းရင်းမြစ် - 3030 ဦး ဆောင်ခဲ့သည်Certificate: CACE CB / CB / VDE / TUV / UL / ETL / SAA
အမှတ် 36 တွင်ဂစ်ပါလိဂ် 26 လမ်းရှိ Shiqi, Zhongshan, Guangdong, China (Post Code: 528400) အဓိကထုတ်ကုန်များ 20210 Main Provests ။ကြွယ်ဝသောထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူနိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုအဆက်မပြတ်လေ့လာပြီးရှုပ်ထွေးသောပစ္စည်းကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ထို့အပြင်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းများကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အသံအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ရှိသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်အတွက်အဆင်သင့်အခြေအနေများဖြစ်သည်။
Giga ဂန္အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း 20169 မီး
LED မျက်နှာကျက်ဆီမီးခွက်, LED ကိုဆွဲပြားပစ္စည်း: လူမီနီယမ် + သံ + acrylicSize: DIA ။ 420mm / 600mm / 800mmLumen: 4300LM, 5270LM, 8600LMအရောင်: စန္ဒီအဖြူ / စန္ဒီအနက်ရောင် / ရွှေ Brushlight source: ကို LED 2835လက်မှတ်: အီး / သမဝါယမ / VDE / TUV / ul / ETL / SAA
OEM / ODM0န်ဆောင်မှုများ
Giga Lighting သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီးခွက်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး LED ပစ္စည်းများနှင့်စီမံကိန်းများအတွက်အားကောင်းသောကုန်သွယ်ရေးမိတ်ဖက်ဖြစ်သည်။ ဥရောပဈေးကွက်သို့အလျင်အမြန်စျေးကွက်သို့မီးလျှံထုတ်ကုန်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်အသက် 25 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချသည်, ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုစိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းနှင့် ပို. စဉ်းစားခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းများပေးရန်အခွင့်အလမ်းများပိုများလာသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်း "ထူးချွန်မှု, လူတွေကိုလေ့လာခြင်း,
1. ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်း - ODM Business တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးကဲသောအပြင်,
2. အတွေ့အကြုံ - 25 နှစ်ကျော်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အိမ်အလှဆင်ထုတ်လုပ်သူများ, သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်။
Professional တရုတ်မီးခွက်ထုတ်လုပ်သူ -Giga အလင်းရောင်ထုတ်လုပ်သူများ
ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုမှတဆင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောစံ run ။
Giga Lighting သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်နှစ်ရှည်လများအလင်းရောင်ထုတ်လုပ်သူနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်သည်။ ပို့ကုန်အတွက်သာမီးအိမ်ထုတ်လုပ်မှုကို 25 နှစ်ကျော်ကြာသောမီးအိမ်ထုတ်လုပ်မှုကိုသာထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥရောပ, မြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိကရှိဖောက်သည်များကို0န်ဆောင်မှုပေးသည်။
အရိုးရှင်းဆုံးမီးမောင်းထိုးပြခြင်းမှစတင်ခြင်း Giga Lighting သည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုအာရုံစိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များကထောက်ပံ့ပေးသောနမူနာစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်မှုမှစတင်ခဲ့ပြီးထုတ်လုပ်မှုပုံစံတွင်တဖြည်းဖြည်းစုဆောင်းထားသည့်အတွေ့အကြုံများကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်ခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလင်းနှင့်အရိပ်၏အလှအပကိုကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းကိုတဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။
ယနေ့ Giga Lighting သည် Ggongshan မြို့တွင်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်း 2000 ကျော်နှင့်ထုတ်ကုန် 1000 ကျော်နှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်း2ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ခေတ်သစ်စတိုင်အပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ကုန်များသည်ပြင်ပမှကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်အလှဆင်ခြင်း,
Giga Lighting သည် LED ၏လယ်ကွင်းသို့အချိန်ကြာမြင့်စွာ0င်ရောက်ခဲ့သည်။ 2013 ခုနှစ်မှစ. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင် LED ထုတ်ကုန်စနစ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ LED ထုတ်ကုန်များ၏ဝေစုသည်လည်းလျင်မြန်စွာတိုးပွားလာသည်။ LED နှင့် Driver တို့၏ပေါင်းစပ်မှု, လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အလင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၏ရင့်ကျက်မှု၏ရင့်ကျက်မှု၏သက်တမ်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည် Giga Lighting ၏အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော 25 နှစ်ကျော်က Giga Lighting သည် "လူတို့အားအလင်း, နှစ်သိမ့်မှုနှင့်နွေးထွေးမှုကိုနှစ်သက်ခြင်း, စျေးနှုန်းများ။
2021 ခုနှစ်တွင် "Kyocera အတွေးအခေါ်" သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တိုင်းအားနှလုံးသားဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံမှပိုမိုကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်0န်ဆောင်မှုများတွင်ပိုမိုကျေနပ်မှုရမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးတွင်အမြဲတမ်းနေလိမ့်မည်။